Wadaag Jacaylka iyo Cuntooyinka Taageerada ee Shaagagga - Cuntooyinka Gargaarka
La wadaag cunnooyinka jacaylka iyo taageerada ee shaagagga
Jiilaalkan Subaru Share the Ololaha Jacaylka wuxuu iskaashi la yeelan doonaa Cunnooyinka Gawaarida sanadkii 10aad oo xiriir ah! Markaad iibsato ama kireysato Subaru cusub, laga bilaabo hadda illaa Jan. 2, $250 iibsashadaada waxay aadi doontaa sadaqo aad dooratay. Meals on Wheels waa mid ka mid ah afarta hay'ad samafal ee aad fursad u heli doontid inaad ka doorato.
Haddii aad raadineysay inaad iibsato ama kireysato gaari cusub, tixgeli inaad hubiso iibinta deegaankaaga 'Subaru'. Adoo ku dooranaya Cunnada Taayirada markii aad iibsaneysid Subaru, iibsigaaga keliya ayaa kuu keenaya $250 barnaamijyada Meals on Wheels ee ku yaal Minnesota, kuwaas oo cunto u geeya waayeelka iyo dadka naafada ah.
Ma jiro wax xaddidan oo ku saabsan inta Subaru ugu deeqi doono Wadaagiskeeda wadaagayaasha sadaqada jacaylka, markaa haddii baabuur cusubi kuu jiro kaararka xilligan fasaxa ah u gudbi dukaankaaga subaru ee deegaankaaga oo hubi inaad ka hubiso sanduuqa Cuntada
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida ololaha Wadaag Jacaylka u shaqeeyo ama aad u hesho tafaariiqle Subaru kuu dhow halkan guji.
Diisambar 5, 2017